Hel Bitcoins lacag la'aan ah iyo lacagaha kale ee digital maalin kasta | Show Top
Hel Bitcoins lacag la'aan ah iyo lacagaha kale ee digital maalin kasta
Bitcoin waa nooc ka mid dhamaystiran oo lacag digital, taas oo ah lacagta loo gudbin karaa inta u dhaxaysa laba qof. Isbarbardhig sheegay in lacagta loo gudbin karaa isla ee xawaaraha ah e-mail.
Waa isku faca ah in iskufilka lacagta digital network helay by barnaamijyada software computer la odhan jiray Satoshi Nakamoto. Ujeedada kama dambaysta ah ee nidaamkan waa in ay soo saaraan macaamil xawaalad lacag ah si elektaroonig ah la fii aad u yar.
Features ee Bitcoin:
Network Baahsan: Bitcoin aan la maareynin ama gacanta ku haya nidaamka wax network dhexe.
Setup: Koonto bangiga Dejinta waa hawl aan caddayn yara oo mararka qaarkood u haystaa habka weyn, laakiin bitcoin oo noo ogolaadaa in la furo xisaabta dhowr ilbiriqsi gudahood su'aalo ma la weydiiyay.
Anonymous: User A yeelan karaan tirada n of cinwaanada bitcoin.
Kharashka: Bitcoin waxba kaama qaadi idinla… Qidmad gabi ahaanba waa bilaash ah ama haddii kale waxa ay qaadaan aad u yar.
Islamarkiiba: Haddii nidaamka wax kala iibsiga kale, bitcoin bixinta habka qaadataa daqiiqo kaliya ka yar.
Hel boorsada jeebka oo lacag la'aan ah bitcoin
Nidaamka jeebka Our gebi ahaanba bilaash ah oo aad samayn kartaa oo ka kala iibsiga caalamka oo dhan uu si xor ah. Waxay u eg tahay bangi oo kala duwan ordaya on halis adiga kuu gaar ah. Sida aan horeba u soo sheegnay Bitcoin aan la shaqeeya qof. Bitcoin ma fiirin macaamilada aad, arkaysid kafado iyo hay'adaha kale.
Maxaad u baahan nahay si ay u tagaan, waayo, Bitcoin: Gaar Bank
International: Qof kasta oo ka meel kasta wareejin karaan lacagta adduunka
Jeebka Secure: Our jeebka si weyn Windows XP si uu u badbaadiyo lacag ka tuugada iyo tuugo. No code xaasidnimo weerari doonaa habka shaandhaynta spam aamin. Macluumaadkaaga oo dhan oo ay sameesay nidaamka ammaanka hodan.
Mobile iyo Desktop: Waxaa laga heli karaa adiga oo isticmaaleya isticmaale mashiinada mobile iyo desktop.
Tilmaamaha kale ee:
Free, Kharashka No
Khatarta macaamiisha lacag la'aan ah kooxda encryption
Tallaabooyinka nabdoonaanta ansixinta heer Sare
Farriimaha bixinta Email
Hel Bitcoins free
Ku biiritaanka in nidaamkeena waxaa aad waxba ka! Its gebi BILAASH AH. Marka geedi socodka ku biirin hesho in ka badan, waxaan deyn doonaa jeebka QoinPro la 0.00000250 BitCoins , 0.00007671 LiteCoins , 0.00604838 FeatherCoins , 0.24640460 Virtacoins , 0.00056826 PeerCoins iyo 0.00004063 DarkCoins. Additioanlly, maalin walba jeebka QionPro waxaa ka buuxsamay credits naga.
Daily (Ay ka mid yihiin sabtida iyo Axada ee) ee lacagta birta ah hoos lagu dari doonaa kafado xisaabtaada si toos ah.
BitCoin: 0.00000002 BTC * Gunooyin dheeraad ah
LiteCoin: 0.00000036 LTC * gunooyin dheeraad ah
FeatherCoin: 0.00002827 FTC * Gunooyin dheeraad ah
Virtacoin: 0.03577794 SIREN * Gunooyin dheeraad ah
PeerCoin: 0.00000630 PPC * Gunooyin dheeraad ah
Darkcore: 0.00000040 DRC * Gunooyin dheeraad ah
Iska bilowday QoinPro:
"QuinPro aanu dadka ka caawisaa ma aha oo kaliya in ay soo iibsato Bitcoin sidoo kale waxaan ku hanuunin in si dhaqso ah loo heli karo in nidaamka ammaan-bixinta"
Tags: Lacagta Digital
Lacagta Digital Freebies How To Talineyno No comments Item Jaishi
← Top 10 goobaha si ay u sameeyaan & shaqeysatid lacag free online (sameeyo $10,000+ dollar bil ah Sida loo kordhiyo xasuusta video ay u 256mb in VirtualBox? →